Ogaden News Agency (ONA) – Wasaarada Arimaha Dibada Ee Wayaanaha oo Musuq Lagu Eedeeyay.
Wasaarada Arimaha Dibada Ee Wayaanaha oo Musuq Lagu Eedeeyay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in todobaadkan si wayn loo hadal hayay musuq maasuq baahsan oo Wasaarada Arimaha Dibada ee Itoobiya ay ku lugyeelatay.
Sida xogta aan kuhelayno Wasaarada Arimaha Dibada ee Wayaanaha ayaa lagu eedeeyay in ay faraha kula jirto musuq maasuq baahsan, waxaana lasheegayaa in wasaaradu ay noqotay mida ugu musuqa badan dhamaan hay’adaha kala duwan ee xukuumada wayaanaha.
Xisaabiyaha guud ee xukuumada wayaanaha ayaa shaaca ka qaaday in wasaarada arimaha dibada ee wayaanuhu ay lunsatay dhaqaale aad ubadan oo sida uu sheegay Malaayiin Dooller ah, wuxuuna xisaabiyuhu sheegay in ay wasaaradu ladaalaa dhacayso musuq aan laqiyaasi karin.
Sidoo kale xisaabiyaha guud ee xukuumada wayaanaha ayaa sheegay in laxidhay qaybtii maaliyada ee Wasaarada Arimaha Dibada ee wayaanaha, taas oo sida uu xusay kulug yeelatay musuq maasuq baahsan, wuxuuna xisaabiyuhu sheegay in lagu jiro baadhitaan balaadhan oo lagu xaqiijinayo musuqa.
Inkasta oo dhamaan hay’adaha kala duwan ee wayaanaha uu ragaadiyay musuqa iyo wax isdaba marinta ayaa hadana hoosta laga xariiqay in Wasaarada Arimaha Dibadu ay tahay meel ay shakhsiyaad ku ganacsadaan, waxaana laxaqiijiyay in safiiradu ay yihiin laanta ugu musuqa badan ee wasaarada hoos timaada.
Isku soo wada duub oo wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa kaalmaha ugu horeeya kagalay musuq maasuqa wadamada Africa, waxaana lasheegayaa in uu musuqu Itoobiya kusii fiday kadib markii lacagihii adkaa wadanka si sharci daro ah looga saaray taas oo keentay in waxkasta uu wadanka gabaabsi kunoqday.